ကျေးဇူးတင်သင့် မတင်သင့် ( Henry Aung ) — PALNet
ကျေးဇူးတင်သင့် မတင်သင့် ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ခေါင်းစဉ်ပေးထားသည့် ကျေးဇူးတင်သင့်မတင်သင့်ကတော့ ဤစာစုပြီးဆုံးအောင်ဖတ်၍ မိတ်ဆွေတို့သာ ဆုံးဖြတ်ပါလေ။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့သိပြီး ဖြစ်သည့်အတိုင်း ယခုတလော အိမ်တွင်း ပုန်းနေရသဖြင့် အဘယ်သို့သော Cryptocurrency များ အလကားရနိုင်မည်လဲ ဟု စနည်းနာနေခဲ့မိပါသည်။
ဈေးကွက် မပေါက်သေးသော Token များ၏ airdrop များအားလည်း စိတ်မဝင်စားပါ။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသည်မှာ ဈေးကွက်ပေါက်ပြီးသော token များအား မည်သို့ အလကားရနိုင်မည်နည်း ဟူသော အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။ ကြေညာသူတို့ကလည်း လူတယောက် အကောင့်တခုအတွက် 5$ မျှ သုံးလိုက်လျင် ကိစ္စမရှိသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖို့ 5$ သည် ထမင်း ၂ နပ်လောက် ကောင်းကောင်းစား၍ ရမည်ဟုထင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရနိုင်သမျှ သော coin / token များအား မိုးစက်ပေါက်များ စုသလို ၊ နှမ်းတစေ့ချင်း စုသလို လိုက်စုဆောင်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လျှာရှည်နေသည်နှင့်ပဲ လိုရင်း မရောက်တော့။ အပိုဝင်ငွေလေးရနိုင်သည့် အကြောင်း ဆက်ကြပါအုံးစို့။
မိတ်ဆွေတို့ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်ကြသည့် အတိုင်း steemit မှ Hive ခွဲထွက်ရာ ကာလဖြစ်သော February - May 2020 ကာလသည် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အဖို့ Covid-19 ပထမလှိုင်း ဖြင့် အိမ်တွင်း ပုန်းနေရချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ အတူ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကလည်း ( အားလုံး ဆိုသော်လည်း ၁၀ ယောက်ပြည့်မည်မထင် ... ရှိစေတော့ ) Steemit အား လုံးဝစွန့်ခွာကာ Hive platform သို့ အခြေချ ရန် ကြိုးစားနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးသတိထားမိပေလိမ့်မည်။
Hive သည် Steemit မှ ခွဲထွက်ပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင် Hive token ဖြင့် လည်ပတ်နေခဲ့ရာ Hive သည် အစပိုင်းတွင် အတော်ရေပန်းစားခဲ့ကာ 0.80 $ ကျော်အထိ ဈေးတက်ခဲ့သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း Hive platform သည် အထကောင်းခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ နည်းပညာတူ Platform နှစ်ခုခွဲထွက်ရာတွင် နှစ်ခုအားပြိုင်မြဲဖြစ်ရာ တခုက ကျဆုံးရစမြဲဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့သည် Steemit account တခုတည်းဖြင့် SP ရှိသလောက် HP လည်းရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလကားရသော Hive အား ရောင်း၍ Steemit တွင်ဆက်နေမည်လော ..? ရှိသမျှ SP အားလုံးထုတ်၍ Hive platform သို့ အခြေချကြမည်လော ...? ဟူ၍ ရွေချယ်စရာ များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် လူအများက Steemit အား စွန့်ခွာကာ Hive သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြပါသည်။ Hive အနေဖြင့် ဈေးကွက်တွင် အကျပိုင်းသို့ ရောက်နေသော်လည်း Blogging platform တခုအဖြစ်တော့ Steem ထက်ပို၍ အောင်မြင်မှုရနေပါသည်။ ဤသည်က ကျွန်တော်ပြောလိုသော Steemit နှင့် Hive platform ။
ယခုပြောမည်က May 2020 နှောင်းပိုင်းတွင် Blurtter ဟူသော Blockchain ကလည်း Hive platform အား နမူနာယူကာ Steemit အကောင့် ပိုင်ဆိုင်သူတိုင်း Blurtter blockchain သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသလို မိမိ၏ Blurtter Account အားလည်း Steemit Key များဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟူ၍ ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ မိမိတွင် SP ရှိသလောက် Blurt power ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Hive platform လုပ်သကဲ့သို့ ပုံစံတူ ကူးချခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပြီ။ Steemit အကောင့် ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း ရှိခဲ့ဘူးသူ SP စုခဲ့ဘူးသူများ Blurt token များ အလကားရနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း Steemit Keys များအား သိမ်းထားသူဖြစ်ရာ ဝင်ရောက်ကြည့်လိုက်တော့ .... အလာလား ... Blurt Power 6000 ကျော် ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။
အမှန် တော့ ကျွန်တော့ တွင် SP 15000 ကျော်ရှိရာ ထိုအချိန်က Power Down နေချိန် ဖြစ်သောကြောင့် Blurt token အား Airdrop ချရာတွင် ကျွန်တော့ SP 6000 ကျန်ရှိနေချိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကိစ္စမရှိပါ။ Estimate Value အားကြည့်လိုက်တော့ 60$ ကျော်ရှိနေပါတော့သည်။
အဘယ်သို့သော Exchange တွင် ချရောင်းနိုင်သနည်းလေ့လာကြည့်သော် Hive platform ပုံစံအတိုင်း Ionomy တွင် ဈေးကွက်ဖွင့်ထားပါသည်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်ကာ မိမိ Wallet estimate value အားသာ ကြည့်ကြပါကုန်။ Steem power down နောက်ကျသူတို့ မိမိတို့ Steem power ရှိသလောက် အပြည့် အဝရကြပါလိမ့်မည်။
Blurt သည်လည်း blogging platform တခုဖြစ်ရာ မိတ်ဆွေတို့ အဖို့ Blurt power အားစုထားမည် ဈေးတက်မှ Power down ၍ ရောင်းမည် ဆိုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ wallet မိမိ သဘောအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတခုအား သတိပေးလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် Steemit key တခုတည်းဖြင့် Steemit / Hive / Blurt စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားတူညီသော Blockchain သုံးမျိုးအား အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် Hive platform အား Steemit key ဖြင့်သာ ဆက်၍ သုံးနေသည် Hive platform ပြောင်းပြီးနောက်တခါမှ Password မချိန်းရသေးဆိုလျင် Blurt wallet သို့ မဝင်မှီ Hive platform ၏ Key အား ပြောင်းလည်း ပြစ်ရန်လိုပါလိမ့်မည်။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် Blockchain နည်းပညာတွင် မိမိ Key သည် မိမိ Wallet ၏ အသက်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ Blurt သည် သင်၏ posting key နှင့် Active key ရသွားခဲ့သည်ရှိသော် သင်၏ Hive wallet သည် လုံခြုံမှုရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် Blurt သို့ဝင်ရောက်ရန် Steemi key အား အသုံးပြုပါ။ Hive platform အား အခြား Key ဖြင့် ဝင်ရောက်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ Hive platform အား သင်၏ steemit key ဖြင့်သာ ဆက်လက်ဝင်ရောက်နေရဆဲဆိုလျင် သင့်အနေဖြင့် Blurt သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုရန် အကြံပေးပါရစေ။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် နည်းပညာသည် နက်နဲလွန်းပါသည်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သော ကြောင့် နည်းပညာများအား တလွဲ အသုံးချကြသူများ ရှိပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း Steemit တွင် SP စုခြင်းမှ အချို့ Hunt token ကိုရကြသည် ။ ထို့နောက် Hive ကို ရကြသည် ။ ယခု Blurt ကို ရပါလိမ့်မည်။
ယခင်က Steem power စုကြပါ စုကြပါ ဟု သတိပေးခြင်းက အကျိုးမယုတ်ခဲ့ပါ။ Blurt အတွက်တော့ ကျွန်တော့အား ကျေးဇူးတင်ရန် မလိုပါ။ မိတ်ဆွေ၏ ဝရိယသည် မိတ်ဆွေအား အကျိုးပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ Steemit အား ကျေးဇူးတင်သင့် မတင်သင့်ကတော့ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါလေ။
05/10/2020 18;05 PM
#myanmar #cryptocurrency #knowledge #sharing #palnet #leo
actifit.mmplayer4months ago
Blurt ​စျေးကလည်း 0.01 ဆို​တော့ ရှိတာမှ 345 Steem ဆို​တော့ စုစု​ပေါင်း $3.45 ပဲ ရတယ်ဗျာ အလကား ရတာပဲ ​ကျေနပ်ရမှာ​ပေါ့
ရသလောက်ပေါ့ဗျာ... ဒီကြားထဲ Blurt token တွေ ဈေးတက်လာရင်တော့ တမျိုးပေါ့။
အီး အီး တားတို့ Hive account စစ်စစ်ကြတော့ ရဘူး😁
အခြား ခွင်ကောင်းတာလေးများ ပြောပါဦးဗျ
ရှာနေတုန်းပဲ သားလေးရေ... တွေ့ရင် post တင်ပေးပါ့မယ်။
Wow ကြည့်လိုက်တော့ Burt power 60 ကျော်နဲ့ burt 38 ကျန်သေးတယ်ဗျို့😘။ Steemit ကိုတော့ ကျေးဇူးတွေ အရမ်းတင်နေမိပါတယ်ဗျာ။
Key လေးတွေတော့ ဂရုစိုက်ဗျို့...
Key က hive ပြောင်းကတည်းက ပြောင်းထားတာ
Recovery account ရော ပြောင်းထားတယ်
Steemit မှာ တစ်ပြားမှ မရှိတော့ပါ hive & steemit က
Steemit ထဲဘားမရှိလည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ ဦးထွေးအကောင့် ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာ 435 Blurt power ရှိနေသေးတယ်။ 4.36$ ဖိုးလောက်တော့ရှိတာပေါ့။
အို ဂလိုလား ကျွန်တော် က မရှိတော့ဘူးမှတ်တာ 4$ကြီးများတောင်။